Ahlu-Sunna oo aan la dhacsaneyn habka iyo hannaanka dowladu wax u wado oo kulan ku… – Hagaag.com
Ahlu-Sunna oo aan la dhacsaneyn habka iyo hannaanka dowladu wax u wado oo kulan ku…
Iyadoo uu wali taagan yahay khilaafka Dowladda Dhexe iyo maamulka Ahlu Sunna ayaa waxaa xalay degmada Dhuusa-Mareeb kulan waqti badan qaatay ku yeeshay hoggaanka ugu sarreeya Culima’udiinka Ahlu Sunna Waljameeca oo looga arinsanayay dhismaha Dowlad Gobolleedka Galmudug.
Kulankan ayaa imanaya xili maalintii shalay ay soo saareen Guddiga Farsamada Dowladda Federaalka u xil saartay dhismaha Galmudug hab raaca Doorashada.
Warar ka soo baxay kulanka xalay dhaxmaray hoggaanka ugu sarreeya Ahlu Sunna ayaa sheegaya in leysku raacay qoddobo dhowr ah oo ay ka mid yihiin :-
In Guddiga Farsamada iyo dhismaha Galmudug ee uu magacaabey Sheekh Maxamed Shaakir ay muddo Toddobaad Gudahood ay ku soo xulaan kuna shaaciyaan xubno Baarlamaan oo ka kooban 89 xubnood.
In Wadatashi kaddib Guddiga Farsamada Ahlu Sunna soo saari doonaan habraaca doorashada Galmudug iyo mowqifkooda howlaha ay dowladda Federaalka ka wado deegaannada Galmudug.
In tallaabo kasta oo ay qaadayaan ay noqoto mid taxadar leh, iyada oo hoggaamiyaha Ahlusunna Maxamed Maxamuud uu walaac ka muujiyey sida ay dowladda u wado dhismaha Maamulka Galmudug.
Iyadoo oo ugu danbeyntii beesha caalamka u diray ashtako ka dhan ah Dowladda oo ay ku eedeeyeen in ay iska dhega tirtay heshiiskii ay wada galeen, isla markaana ay guda gashay xulista Baarlamaanka Cusub ee Galmudug.
Ma jiro ilaa iyo hadda wax war ah oo ka soo baxay dhinaca Dowladda Soomaaliya oo la xiriira kulamada u soconaya Ahlu Sunna Waljameeca oo aan la dhacsaneyn habka iyo hannaanka ay dowladdu wax u maamuleyso.